Ra'iisul Wasaaraha Ciraaq oo is-casilaya kadib geerida rayid badan
Ciraaqiyiinta ayaa waxay dalbanayaan shaqooyin, soo afjarida musuqmaasuqa iyo adeegyadda bulshadda oo la hagaajiyo.
BAGHDAD, Iraq – Ra'iisul Wasaaraha Ciraaq, Caadil Cabdul Mahdi, ayaa jagada baneynaya, sidda uu sheegay xafiiskiisa, ka gedaal markii hal maalin gudaheeda ay ku dhinteen 40 qof banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda.
Go’aanka Cabdul Mahdi ayaa sidoo kale yimid saacado kadib wadaadka ugu sareeya Shiicada Ciraaq uu cambaareeyay in awood loo adeegsado dibad-baxayaasha oo dalbanaya in lasoo dhiso xukuumad cusub.
Wadar ahaan, ku dhowaad 400 ayaa ku geeriyootay mudaaharaadka oo socda tan iyo bishii October ee sanadkan 2019-ka.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa sheegay in uu aad uga walaacsan yahay wararka ku saabsan in rasaas nool nool loo adeegsanayo banaanbaxayaasha, isaga oo ku baaqay "iska caabin xadidan".
Guterres ayaa ku tartarsiiyey dowladda Ciraaq in ay talaabo ka qaado cid kasta oo ay ku cadaato in ay ku lug lahayd dhimashada rayidka.
Ciraaq oo sanadihii u dambeeyay kasoo kabanayey dagaalo wejiyo kala duwan leh ayna ku jiraan kuwa siyaasadeysan ayaa ku biiraya liiska wadamada Carabta ee sanadkan 2019-ka ay ka dhacayaan kacdoon ka yimid shacabka.
Diblumaasiyiin u dhashay Turkiga oo lagu khaarijiyey Ciraaq
Caalamka 17.07.2019. 15:55
Dabley hubeysan oo aanan wali la aqoonsan ayaa rasaas ooda uga qaadey maqaayad ay ku jiraan mas'uuliyiintan.
Ismiidaamin lagu weerarey Masjid oo galaaftay tobanaan ruux
Caalamka 21.06.2019. 19:01
Ciraaq: Dhulkeena waan ka saarnay Daacish
Caalamka 09.12.2017. 16:18
Danjirihii Soomaaliya ee Ciraaq oo ku dhintay magaalada Muqdisho
Soomaliya 16.06.2020. 10:35
Ciraaq: Dagaal ka dhacay gobolka Kirkuk
Caalamka 16.10.2017. 11:24
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Ciraaq oo telefoonka kuwada hadlay
Soomaliya 06.05.2020. 17:09
Tobban madfac oo lagu garaacay saldhiga ciidamada Mareykanka
Caalamka 11.03.2020. 21:55